Sheekada Tumhari Sulu: Vidya Balan wey soo laabatay inaba caadi ma ahan bandhigeeda | Filimside.net
Home » Sheekada Filimada » Sheekada Tumhari Sulu: Vidya Balan wey soo laabatay inaba caadi ma ahan bandhigeeda
Sheekada Tumhari Sulu: Vidya Balan wey soo laabatay inaba caadi ma ahan bandhigeeda
Taariikhda: November 17, 2017
Waxaa subaxaan tiyaatarada la saaray filimka Tumhari Sulu oo ay hogaamiye ka yahay Vidya Balan waana filim shactiro, arimaha qoyska iyo mada daalo dhameestiran.
Jilaayaasha Vidya Balan, Manav Kaul, Neha Dhupia, Malishka Mendonsa, Vijay Maurya
Muxuu Ku Wanaagsan: Haweenay da’deeda dhex dhexaad tahay oo waligeed guri joogto ahayd waxay dooneysaa inay Wariye bulshada mada daaliso noqoto, haweeneydaas waa Vidya Balan, waana qofka kaliya ee filimkaan loo daawan doono ayadoo bandhig heer sare ah la timid iyo mada daalo wacan u daawo Tumhari Sulu.
Muxuu Ku Liitaa: 140-daqiiqo soconaayo filimkan waxaa wacneyd in 15 ilaa 20-daqiiqo laga jaro si adigoo xiiso u qabtid mashruucaan usoo idlaado sidoo kalena qaybta hore waa lagu yara caajisaa.
Daawo Ama Ha Daawanin: Tumhari Sullu yuusan ku seegin hadii aad Vidya Balan taageero u tahay waa filim ay ku fara yareesatay xidigtaan hadii kale Tumhari Sullu waad iska dhaafi kartaa daawashadiisa.
Fariinta Filimka Tumhari Sulu oo Kooban: Sulochana (Vidya Balan) haweeney guri joogto ah si farxad hana kula nool seygeeda Ashok (Manav Kaul) iyo wiilkeeda Pranav (Abhishek Sharrma).
Sulochana (Vidya Balan) waxay jeceshahay ama ku riyootaa inay idaacad ka shaqeyso si ay dadka u mada daaliso ayadoo leh xirfado kala duwan iskana dhigi karto jilaayaasha caanka ah sida Hema Malini Sridevi iyo kuwo kale.
Maalin maalmaha ka mid ah waxay ku guuleysanaa hadiyad tartan Raadiyaha uu ka qabto wariyaha caanka ah RJ Albeli Anjali (Malishka Mendonsa) kadibna xafiiska idaacada ayay booqanee si ay abaal marinteeda usoo qaadato waxayna goobta kula kulmee gabadha idaacada madaxda u ah Maria (Neha Dhupia).
Sulochana (Vidya Balan) waxay weydiisanaa Maria (Neha Dhupia) in barnaamij looga dhiibo idaacada sidoo kalena xirfadeeda ay leedahay waxaana loo dhiibaa bandhig mada daalo oo habeenkii xili dambe soo galo kaasi oo looga hadlo arimaha nolosha dadka qaan gaarka ah.
Sulochana (Vidya Balan) shaqada wey aqbalee xili dambe ah wuxuuna bandhigeeda noqonaa mid Hit ah oo habeenkii dhan loo soo wada jeedo madaama ay si mada daalo ku dheehan uga sheekeyso arimaha nolosha dadka qaan gaarka ah la xariirto.
Balse Sulochana (Vidya Balan) nolosheeda gaar ah ayaa culees badan soo wajahaayo waxaana ku adkaaneyso sida reerkeeda ay waqti u siin laheyd iyo shaqada habeenkii xiliga dambe u aadi laheyn waana waxa qaybaha dambe filimkaan loo daawan doono.
Maxaa laga yiri fariinta filimka Tumhari Sulu: Director Suresh Triveni amaan gaar ah ayuu u mudan yahay madaama sheeko sahlan uu doortay kana dhigay mid aan laga xiiso dhigeyn inta badan kaliya filimkaan wuxuu ku liitaa in waqtigiisa la gaabiyo wacneyd sidoo kalena halka saac hore xiiso badan malahan laakiin qaybta marka Vidya wariye noqoto ayuu xiiso aan dhamaad laheyn leeyahay shactiro iyo murug ahaanba.
Bandhiga Jilaayaasha: Vidya Balan waxay la timid bandhig heer sare ah waxaa la dhihi karaa Tumhari Sulu waa bandhigeedii ugu wacnaa tan iyo Kahaani kadib waana hubaal in xidigtaan lagu soo jeclaan doono filimkaan.
Neha Dhupia iyadana qurux dheeri ah iyo qaab jiliin oo ku haboon doorkeeda ayay la timid halka Manav Kaul isagana si wacan ula jilay Vidya madaama uu seygeeda ku jilaayo.
Gunaanad: Tumhari Sulu waa filim wacan oo la daawan karo lehna shactiro, mada daalo iyo murugo sidoo kalena Vidya Balan ku fara yareesatay sidoo kalena daawadayaasha soo dhaweyn doonaan balse hadal heyntiisa oo hooseyso awgeed ayaa sababi karto in fagta hore ganacsigiisa liito.
Laakiin gadaal wuu ka gadmi karaa hadii daawadayaasha soo wada dhaweeyaan fariintiisa madaama dadka filimada ka faloodaan sheeko ahaan ay siiyeen 3.5/5 waana qiimeyn muujineyso in sheekadiisa wacan tahay.
Fadlan hoos ka daawo goos gooska filimka Tumhari Sulu:
Waxaa Aqrisay 631
3 Responses to Sheekada Tumhari Sulu: Vidya Balan wey soo laabatay inaba caadi ma ahan bandhigeeda
Lkn Zxp Zakariye Ittefeq Wuxu Socana 1:34 Daqiiqo Qayblabad maleyahay
Lama sheegin in qayb labaad laga sameenayo Ittefaq walaal
sheekada filimka aksar2 nalawadaag sxb zekeria adoo mahadsan.